Iràna · Novambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Iràna · Novambra, 2018
Tantara mikasika ny Iràna tamin'ny Novambra, 2018
Fanoherana21 Novambra 2018
Manome ny fampahalalam-baovao mivantana ny mpanao gazety Iraniana ao amin'ny bilaoginy. Roa volana lasa izay (2005) dia navoakan'i Webnameh ny sarin'ireo mpanohana an'i Ganji teo anoloan'ny hopitaly talohan'ny namoahan'ny tranonkala hafa na ny gazety izany. Herinandro vitsy talohan'izay,..
(Marihina fa tamin'ny volana Septambra 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Niaina zava-baovao ny bilaogera Iraniana tao anatin'ny enim-bolana farany dia ny Famahanana Bilaogy Iraisana. Nisy ny bilaogera maro avy any amin'ny toerana samihafa niaraka tamin'ny fomba fijery samihafa nivondrona ary nanomboka ny KHABARCHIN amin'ny teny Farsi. Sehatra ho an'ny bilaogera...
Afrika Mainty10 Novambra 2018